Ụdị Desoxymethyltestosterone Raw (3275-64-7) hplc ma98% | AASraw
Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ
SKU: 3275-64-7. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Desoxymethyltestosterone ntụ (3275-64-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ bụ otu n'ime ndị mbụ na-emepụta steroid nke a ga-ere ahịa dị ka ọgwụ na-eme ka ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-arụ ọrụ na-ejikọta na androgen receptor (AR) dị ka ọkara dịka DHT, ma kpatara mmetụta ndị dị na 17 - AAS dịka mgbagwoju anya, dịka imebi imeju mgbe a na-ewere ya n'ọnọdụ dị elu nakwa dịka ọnọpụ ọbara ventricular.
Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ isi agwa
aha: Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ (DMT) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C20H32O
Ọbara arọ: 288.46
Melt Point: 144-146 ℃
agba: White ma ọ bụ Wepụ ọcha Crystalline ntụ ntụ
Aha ndị ọzọ: DMT, Pheraplex, DMT, Madol, Desoxymethyltestosterone / DMT, Madol ntụ ntụ, Pheraplex ntụ ntụ
Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ Usage
Ndị ọrụ Madol nwere ike na-atụ anya inweta ọganihu ngwa ngwa na nwelite ha ma mụbaa uru anụ ahụ, n'enweghị njigide mmiri. Dịka ụbụrụ nke anabolic nile, ọ na-enye aka na njikọ protein, mgbake, ma mụbaa n'ọbara ọbara ọbara (RBC).
Ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na BALCO jiri Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ, na mgbakwunye na ogige ndị ọzọ, iji mee ka ahụ ike na ike na-arụpụta ezigbo ihe. Ndị na-eme egwuregwu na BALCO (ma eleghị anya na-agba Madol) bụ MLB na kpakpando NFL: Barry Bonds, Bill Romanowski, Jason Giambi; nakwa ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu Olympic dị ka Marion Jones.
Kedu ihe usoro doso nke Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ
Otu usoro nke 10-30mg kwa ụbọchị kewara AM na PM dị mma, mana usoro nhazi usoro ihe ka mkpa bụ 3 (ugboro atọ) kwa ụbọchị. Echefula 50mg kwa ụbọchị, ebe ọ na-adịghị mkpa site na nke a nwere ike. Ọzọkwa, a gaghị atụ aro na ị gafere 6-8 izu na okirikiri. Oge mbụ Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ ndị ọrụ kwesịrị naanị na-agba ọsọ 15mg kwa ụbọchị, maka izu 4, iji chọpụta mmetụta ndị dị na ya.
Nke a bụ ngwakọ oral, injectable okirikiri na nke dabere na Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ na trenbolone:
Izu Madol Trenbolone
Cardarine Acetate N2Guard Proviron
1 20mgs / ED 50mgs / ED 20mgs / ED 5caps / ED 20mgs / ED
2 20mgs / ED 50mgs / ED 20mgs / ED 5caps / ED 20mgs / ED
3 20mgs / ED 50mgs / ED 20mgs / ED 5caps / ED 20mgs / ED
4 20mgs / ED 50mgs / ED 20mgs / ED 5caps / ED 20mgs / ED
5 20mgs / ED 50mgs / ED 20mgs / ED 5caps / ED 20mgs / ED
6 20mgs / ED 50mgs / ED 20mgs / ED 5caps / ED 20mgs / ED
Ogologo Ogologo Oge Ogologo:
Ụgwọ (N'uba nke -5 na + 5):
Ọkpụkpụ Erite: + 4
Ike nweta: + 3
Akpa Achọpụta (Ihe Na - egosi Ihe Na - egosi na ọ na - efu ọnwụ): + 1
Idebe mmiri: + 2
Aggression: + 2
Ihe otutu: + 1
Akwụsị Hair: + 1
Ebe ọhụụ sara mbara: + 1
Ọrịa Imeju: + 3
Lethargy + 2
Olee otú Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ si arụ ọrụ
Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ bụ otu n'ime ndị mbụ na-emepụta steroid iji na-ere ahịa dịka ọgwụ na-eme ka ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-arụ ọrụ na-ejikọta na androgen receptor (AR) ihe dịka ọkara dịka DHT, ma kpatara mmetụta ndị dị na ya nke 17A-alkylated AAS, dịka imebi imeju mgbe a na-ewere ya n'ọtụtụ dị elu yana ọbara hypertrophy.
Nnyocha egosiwo na ọ nwere mmetụta anabolic mmetụta 160% nke testosterone, ebe ọ bụ nanị 60% dị ka androgenic. Nka anabolic / androgenic ya bụ 1200 / 187. Tụkwasị na nke ahụ, Madol anaghị eme ka ọ ghọọ estrogen.
Ndị ọrụ kwesịrị ịtụ anya ịdịwanye ike dị ukwuu, uru dị arọ, na aji. Enweghi mmeri nke 20lbs na 4-6 izu ole na ole na onyinye a. Mmetụta mmetụta anụ ahụ kasị pụta ìhè ga-abụ nfuli muscle siri ike, mkpụmkpụ ume, ọbara mgbali elu, akpụkpọ anụ, na bloating. Ọ bụrụ na ndị ọrụ chọrọ iwelata mmetụta na-egbu egbu na imeju ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ, DMT nwere ike iji ya mee ihe dị ka 10mg / ụbọchị maka mmetụta dị mma.
N'ịbụ nke na ụlọ a bụ methylated, ọ gaghị ejikọta ya na ndị ọzọ methylated ogige. N'ịbụ nke na-arụ ọrụ nke na-emekarị ala na-arụ ọrụ, DMT nwere ike imetụta ọrụ libido na ọrụ erectile. Enwere ike iwelata mmetụta a site n'ịkwado DMT na testosterone ma ọ bụ otu n'ime metabolites na-abụghị aromati iji chebe ọkwa DHT.
Dabere na ebe ị na-ele anya, a kọọrọ DMT ka ọ bụrụ 2-12 ugboro ọzọ anabolic na 0.4-2 ugboro dị ka androgenic dị ka methyltestosterone. Enwere ya na DMT bụ ihe na-emekarị n'ihi na ọ nwere ụdị ihe yiri nke ahụ na 2-androstenol delta, nke na-emekarị pheromone na mammals. Otú ọ dị, ịbụ 17aa steroid hormone na-eme ka ọ gbanwee n'ụzọ dị iche iche ma ọ bụghị ihe na-eme. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ ugbu a ihe edozi na United States.
Desoxymethyltestosterone Ntụ ntụ ntụ
Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ ahịa
Ndi Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ nwere ihe ọ bụla
Dịka, ụbụrụ nwere ike dịka nke a ga-enwe mmetụta dị mma, ma nke a bụ ikpe na DMT. Madol bụ 17alpha-alkylated iji chekwaa onyinye ahụ site n'imeji imeju ya, ọ pụkwara ime ka ahụike ahụike (kpọmkwem cholesterol). A na-atụ aro ka ị na-agba ọsọ mgbakwunye ọsọ ọsọ dị ka N2Guard iji chekwaa imeju na obi gị n'oge usoro cycles. Nsonaazụ ngwa ngwa pụkwara ịpụta ike ọgwụgwụ na ehighi ura, n'ihi ya, ọ dị oké mkpa iji gbanwee ụlọ ọrụ a n'ime izu 6-8. Tụkwasị na nke a, steroid a na-egbochi ya, n'ihi ya, a ga-achọ usoro ọgwụgwọ ọkpụkpụ.
Esi zụta Desoxymethyltestosterone ntụ ntụ si AASraw
1.To kpọtụrụ anyị site na email anyị
usoro nyocha, ma ọ bụ skype
onye na-ahụ maka ndị ahịa (CSR).
Desoxymethyltestosterone Ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ
Androsterone ntụ ntụ
Parabolan (Tren Hex) ntụ ntụ
17a-Hydroxyprogesterone ntụ ntụ Acetate ntụ ntụ (302-23-8)
gosiri 3.00 si 5
Akwukwo (Oblean) uzuzu
gosiri 2.60 si 5
Alpha GPC ntụ ntụ
Tadalafil (Cialis) ntụ ntụ
gosiri 3.36 si 5
CDP choline ntụ ntụ
Orlistat ntụ ntụ
Lorcaserin (Belviq) ntụ
gosiri 3.50 si 5
Magnesium L-threonate ntụ ntụ
J 147 ntụ ntụ
Usoro ọgwụgwọ ọrịa (1)
R & D mmeghachi omume (39)
Ihe nkuzi (32)
Estradiol ntụ ntụ Usoro (4)
ndị ọzọ na- (58)
Ihe niile I Kwesịrị Aboutmara Banyere Pregabalin
Kedu ka Orlistat si arụ ọrụ dị ka ọgwụ na-efu ibu dị arọ?
Synephrine HCL powder - burner fat na mmepu oke
Kedu otu Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) si arụ ọrụ maka ndị na-ahụ maka ahụ
Copyright © 2019 aasraw ikike niile echekwabara.
NKWUP ANDTA NA NKWA: A na-ere Ihe Saịtị a Maka Nchọpụta Naanị. Usoro irere tinye. Ọbụghị maka iri mmadụ, ma ọ bụ ọgwụ, ọgwụ anụ, ma ọ bụ nke ụlọ.